ဟဒီးဆ်: အို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် အကြင်သူသည် ကျွန်တော့်အွမ္မသ်၏ အရေးကိစ္စတစ်စုံတစ်ရာကိုတာဝန်ယူထားပြီး ၎င်းတို့အပေါ် ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်ခဲ့လျှင် ထိုသူ့ကိုလည်း ခက်ခဲစေတော်မူပါ။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: အို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် အကြင်သူသည် ကျွန်တော့်အွမ္မသ်၏ အရေးကိစ္စတစ်စုံတစ်ရာကိုတာဝန်ယူထားပြီး ၎င်းတို့အပေါ် ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်ခဲ့လျှင် ထိုသူ့ကိုလည်း ခက်ခဲစေတော်မူပါ။
အမျိုးအစား: ဒအ်ဝဟ်နှင့် ဟိစ်ဗဟ်။ . အစ္စလာမ့် နိုင်ငံရေး။ . အိမာမ်အကြီးအကဲနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စည်းကမ်းချက်များ။ .
အာအိရှဟ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟာ)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) မိန့်ကြားတော်မူခဲ့သည်။ အို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် အကြင်သူသည် ကျွန်တော့်အွမ္မသ်၏ အရေးကိစ္စတစ်စုံတစ်ရာကိုတာဝန်ယူထားပြီး ၎င်းတို့အပေါ် ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်ခဲ့လျှင် ထိုသူ့ကိုလည်း ခက်ခဲစေတော်မူပါ။
မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ မည်သည့် အရေးကိစ္စကိုမဆို သေးသည်ဖြစ်စေ ကြီးသည်ဖြစ်စေ တာဝန်ယူထားပြီး ၎င်းတို့အပေါ် ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်သူ နှင့်ပတ်သက်၍ ဟဒီးဆ်တော်တွင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိပေးထားသည်။ ထိုသတိပေးချက်မှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ၎င်းအပေါ် သူ၏လုပ်ရပ်အတိုင်း ပြန်လည်အစားပေးရန်အတွက် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က မကောင်းဆုတောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဟဒီးဆ်တော်တွင် လူတို့အားခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်သော ခေါင်းဆောင်များနှင့်အုပ်ချုပ်သူများအပေါ် အလွန်ပြင်းထန်သော ခြိမ်းခြောက်မှုပါရှိသည်။
မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ အရေးကိစ္စတစ်စုံတစ်ရာကို တာဝန်ယူထားသူသည် ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ တတ်နိုင်သမျှ နူးညံ့သိမ်မွေ့ရမည်။
ဒအ်ဝဟ်နှင့် ဟိစ်ဗဟ်။ . အစ္စလာမ့် နိုင်ငံရေး။ . အိမာမ်အကြီးအကဲနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စည်းကမ်းချက်များ။ .
အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့် သမိုင်း။ . တမန်တော်မြတ် (ﷺ)၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ။ . တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတော်။ . တမန်တော်မြတ်၏ ကိုယ်ကျင့်တရားများ။ . တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ မေတ္တာတရား။ .
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခက်ခဲသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊ လွယ်ကူသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်တို့ထက်ပိုပြီး ဦးစားပေးခံရသည်ဖြစ်စေ နာခံမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အာဏာပိုင်တို့အား ပုန်ကန်မည်မဟုတ်ကြောင်း အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)ထံ၌ ပဋိညာဉ်ပြုခဲ့ကြသည်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် လူတစ်ဦးအား အုပ်စုတစ်စုကို ခေါင်းဆောင်ရန် ခန့်အပ်ထားရာ ထိုသူသည် ၎င်းတို့ကို လိမ်လည်လှည့်စားကာ ကွယ်လွန်ချိန်ဆိုက်ရောက်သဖြင့် ကွယ်လွန်သွားလျှင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ထိုသူ့အပေါ် ဂျန္နသ်သုခဘုံကို ဟရာမ်ပြုတော်မူမည် ဖြစ်သည်။
တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)၏ ကိုယ်ကျင့်တရားသည် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပင် ဖြစ်သည်။